Ndị na-ahụ maka ihe nkpuchi na ndị na-eme ihe nkpuchi - Ndị na-eme ihe nkpuchi nke China
Ma ọ bụ SARS ma ọ bụ oyibo coronavirus oyi, uwe nchebe ahụ ike na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọdịdị ọ bụla nke nje ahụ, ogo nke uwe mkpuchi ahụike ji nwayọọ nwayọọ na-akawanye mma site na iji nkà na ụzụ mmepụta ihe. Isiokwu a ga-akọwa nke ọma uwe mkpuchi ahụike n'akụkụ ndị a. Emere ihe ngosi mgbochi Thezọ ule, akara nlele na ikewapụta ụdị ihe eji egbochi akwa bụ nke a gosipụtara na Tebụlụ 1. Lee okpokoro b ...
Etu esi eji akwa mkpuchi n'ụzọ ziri ezi? Ojiji nke uwe nchebe nwere ndụ na ahụike anyị, n'ihi ya, ọ dị mkpa ịhọrọ uwe nchebe na-egbo mkpa chọrọ. Ugbu a, ụdị ndị isi ama ama bụ Dupont nke United States, United States Lakeland, 3M, Sperian, na ndị ọzọ. Mgbe ị nwetasịrị uwe nchebe, ojiji ziri ezi dịkwa mkpa. Nchoputa okike nke ejiji No.1 Uwe mkpuchi ahụ ga-abụ nke akọrọ, nke dị ọcha na nke….
Njirimara ： 1. Meltblown akwa na-eji polypropylene dị ka akụrụngwa bụ isi, na dayameta eriri nwere ike iru 0,5-10 micron. Meltblown akwa nwere ezigbo ikuku ikuku ma bụrụ ezigbo ihe mkpuchi. 2. Ejiri otutu ihe ndi ozo, ihe ndi na-adighi ahu aru. 3. Dozie eriri bandeeji na ube a kpuchiri ure ka imegharia ya na iru uzo di iche iche nwere akara eji enwe isi. 4. Ihe mkpuchi nwere ike idobe, idebe ihe ọcha ma dịkwa mma maka iji ya. Ngwa: 1. Ngwa: iji rụọ ...
Njirimara ： 1. Igwe mgbochi imi imi na-adịghị ahụ anya, na-emegharị onwe ya ka ọ dabara ụdị akwa imi dị iche iche, nchebe nchekwa na mma zuru oke; 2. Igwe ikuku dị elu na -eku ume: A na-eji oghere ikuku kpuchie elu ahụ, nke nwere ntụsara ahụ na iku ume. Ntinye ume nwayọ nwekwara nnukwu ọnụnụ ikuku dị ọcha ga-eme ka afọ ju gị; 3. Ihe ntanetị dị nro ma na-agbanwe nkwa na-ekwe nkwa nkwụsi ike na ịdịte aka mgbe ị na-eburu nkasi obi nke iyi; 4. Meltblown akwa na-eji polypropylene dịka ma ...